Akụkọ - Mbupu rụpụtara nke ọma maka ndị bulldozers n'okpuru National Petroleum Project nke Russia
Ebuputara mbupu maka nsogbu nke ndị bulldozers n'okpuru National Petroleum Project nke Russia
Septemba — Oge mgbụsị akwụkwọ na-abịanụ, oge owuwe ihe ubi na-amị mkpụrụ dị iche iche na-esi ísì ụtọ! Bulldozer nke na-agbasi mbọ ike nke ndị ọrụ HBXG maka Russian Petroplem Project nke HBXG meriri ka ebuputara nke ọma maka ahịa CIS ọzọ!
Nke a bụ nzụta nke abụọ maka mbupu nke bulldozers TY165-3 maka ụlọ ọrụ Petroleum Russia.Re Petroleum Petroleumlọ ọrụ Russia nwere afọ ojuju na arụmọrụ arụmọrụ nke usoro mbụ nke SHEHWA ika TY165-3 usoro bulldozers, ọkachasị nke ọma obere okpomọkụ arụmọrụ na magburu onwe pụrụ ịdabere.
TY165-3 bulldozer usoro bu ihe eji eme ihe bu bulldozer nke HBXG meputara na ndabere nke itinye uru nke uru nke katerpillar na bulldozer nke Komatsu bu D55 bulldozer. na nnukwu ike nchekwa ọnụọgụ na a pụrụ ịdabere na & inogide nnyefe system.The enwekwukwa Chassis etiti mma ikike nke dum igwe imeghari ka ọrụ ike ọnọdụ.
Kemgbe mmalite afọ a, ntiwapụ nke COVID-19 agbasaala ụwa niile. Mgbe ị na-arụ ezigbo ọrụ na mgbochi ọrịa na njikwa, HBXG na-elebara anya nke ọma nke njikwa nke ime, na-eme ka mmawanye ngwaahịa na njikwa mma, na-elekwasị anya na mkpesa ndị ahịa, na-eme ihe ngwa ngwa, na-eme ka ọrụ dịkwuo mma, ma na-eme ka afọ ojuju ndị ahịa dịkwuo mma. Ka ọ dị ugbu a, ọnụahịa ahịa ahịa ghọtara na ọ na-eto eto.